Faah faahin Wiilkii Wardheer lagu dilay iyo magacda 3-Gabdhod oo lasocday oo La la’yahay. | ogaden24
Faah faahin Wiilkii Wardheer lagu dilay iyo magacda 3-Gabdhod oo lasocday oo La la’yahay.
Waxaan horay u baahinay dilka Wiil dhalinyara ah oo kamid ah maxaabiis badan oo laga soo Qaaday magaalada Dhagax madow ee Gobolka Jarar, kaasi oo ciidamada Woyanuhu kudileen magaalada Wardheer kadibna maydkiisa ay badhtanka magaalada soo dhigeen.
Wiilkan oo lagu magacaabi Jiray Xasan Cabdi ayaa waxaa 19-ka bishii hore isaga iyo 7-maxbuus oo kale laga soo Qaaday magaalada Dhagax madow oo mudo sanad iyo badh ah ay kuxidhnaayeen, waxaana sabab aan la Garanayn loogu soo Qaaday dhinaca Gobolka Doollo gaar ahaan magaalada Wardheer.
Maxaabiistii lala soo Qaaday marxuumka la dilay oo sida lasheegay 7- ahaa ayaa waxaa kamid ahaa 3-Gabdhood oo dhalinyara ah, kuwaasi oo ilaa iyo hada Raq iyo Ruux Toona aan la Ogayn halka ay kudambeeyeen, sidoo kale 4-ta maxbuus ee kale ayaan iyagana Geeri iyo Nolol toona lagaga war qabin.
Gabdhaha 3-da ah ee kamidka ahaa maxaabiista laga soo Qaaday degmada Dhagax madow ayaa waxaa magacdooda lagu kala sheegay, Sureer iyo Ruqiya Macalin.
Waxaa jirta cabsi badan oo laga Qabo nolosho Gabdhahaasi 3-da ah ee kamidka ahaa maxaabiista laga soo Qaaday degmada Dhagax madow, sidoo kale Ehelka iyo Qaraabada Gabdhaha iyo maxaabiista kale ayaan kadaba tagi karin dadkooda si ay u Ogaadaan xaaladooda nololeed ama dhimasho.
Cadaadiska iyo dilka Aabayeel la’aanta ah ee laguhayo shacabka Ogadenia ayaa mar ba marka kadambaysay Faraha kasii baxaya, waxaana maalin uun kahor ay maleeshiyada Liyuuga Gawaadhidooda si Kas ah Tuulada magaalada Cad ugu mariyeen Hooyo Umul ahayd oo lagu magacaabi Jiray Fardowsa.